SJSZ65 PVC မျက်နှာကျက် panel ကို extrusion စက် - တရုတ် Qingdao Suke Machinery
PVC မျက်နှာကျက် Panel ကို Extrusion စက် -Suke Machinery
အဆိုပါ PVC မျက်နှာကျက် PVC နှင့်အချို့သောအပိုဆောင်းခြင်းဖြင့်ဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာအများအားဖြင့်မီးဖိုချောင်နှင့်သန့်စင်ခန်းအလှဆင်အတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအလင်းအလေးချိန်, အစိုဓာတ်ကို-သက်သေပြ, အပူလျှပ်ကာ၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပြီးပါကပစ်ခတ်ဖို့လွယ်ကူသည်မဟုတ်, မြေမှုန့်ကိုစုပ်ယူပေမယ့် install လုပ်, ဆေးထိုးခြင်းရန်လွယ်ကူ။
2. SJSZ 51 × 105 အမွှာဝက်အူ Extruder
3. Extrusion မှို
1. SWP360 နယ်
2. 200/500 ရောနှော
ဒါဟာအကြိမ်ပေါင်းများစွာအဘို့စမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး, ဒါကြောင့်စွမ်းအင်နှင့်ပစ္စည်းချွေတာနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာကိုချမှတ်ခြင်းဖြင့်ထိရောက်မှုနဲ့အကျိုးအမြတ်တိုးပွားလာ၏အားသာချက်များရှိပါသည်။ ဒါကြောင့်အသွင်သဏ္ဌာန်ထဲကဖြစ်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်မှတပါးယင်း PVC မျက်နှာကျက်စက်၏ထုတ်ကုန်, ချောမွေ့လှပသောနှင့်မျှမထိခိုက်အနံ့ဖြစ်ပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော milky အဖြူ, မုန့်အရောင်, အက်ဆစ်အပြာနှင့်ပန်းပွင့်, parquet, ဝါးနှင့်မက်မွန်၏ပုံစံများ၏ဌန်အဖြစ် PVC မျက်နှာကျက်အများအပြားပုံစံများရှိပါတယ်။ နှင့်သင်တန်း၏, ထို PVC မျက်နှာကျက်၏ပုံစံများနှင့်အရောင်များကိုဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်တွေနဲ့အညီအမှုကိုပြုနေကြသည်။
PVC မျက်နှာကျက်, PVC panel က, PVC မြို့ရိုးကို panel က
5.8m / 5.95m / ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်များကိုအဖြစ်
6mm / 7mm / 7.5mm / 8 မီလီမီတာ / 9mm / 10 မီလီမီတာ / 11mm / 12mm
ပုံနှိပ်ပူ-နေမှုကိုချေဖျက်, pearlite ပုံနှိပ်ခြင်း, peritoneal ပုံမှန်ရတဲ့အရာတွေ, ရတဲ့အရာတွေမြင့်မား
concatenated တဲ့အခါမှာ (1) မြင့်မားသောကျုံ့မျက်နှာပြင်, ကွာဟမှုမရှိဘဲချောမွေ့
အလေးချိန်လွယ်ကူတပ်ဆင်ခြင်းအတွက် (2) Fireproof, အစိုဓာတ်ကို-သက်သေပြ, မှို-သက်သေပြ, ရေစိုခံ, soundproof, အသံ-စုပ်ယူ, အလင်း
ယခင်: SJSZ51 PVC မျက်နှာကျက် panel ကို extrusion စက်
နောက်တစ်ခု: SJSZ80 PVC မျက်နှာကျက် panel ကို extrusion စက်
PVC ခြံစည်းရိုးကိုယ်ရေးဖိုင် Extrusion စက်
PVC စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကိုယ်ရေးဖိုင် Extruder
PVC စကျင်ကျောက်ကြမ်းခင်းကိုယ်ရေးဖိုင် Extrusion လိုင်း
PVC ပလတ်စတစ်ကိုယ်ရေးဖိုင် Extrusion စက်
SJSZ48 PVC မျက်နှာကျက် panel ကို extrusion စက်
SJSZ51 PVC မျက်နှာကျက် panel ကို extrusion စက်